ဟာသ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဟာသ
Posted by water-melon on May 23, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 32 comments
မနေ့ကဘေးအိမ်က အန်တီပြောပြတဲ့ ဟာသလေးကို ပြန်မျှတာပါ။
သူတို့ရွာက ဒေါ်သူရဆိုတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်က ရွာကနေမြို့ကို ဘုရားဖုးကားနဲ့အလည်လိုက်လာတယ်။
တည်းတော့လေး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တည်းတာပေါ့။ တစ်နေ့ကျတော့ ညနေစောင်းမှာ ရွာက အတူတူပါလာတဲ့ ဘုရားဖူးတွေနဲ့
ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့က အအေးဆိုင်မှာ အအေးသွားသောက်တယ်။ ကြံရည်မှာတဲ့သူနဲ့ အစုံမှာတာပေါ့နော် မြို့ရောက်တုန်းသောက်တာရတာဆိုတော့။ ဒေါ်သူရက ဘာသောက်ရမလဲ စဉ်းစားတယ်။ ရွာမှာတုန်းက ဘေးအိမ်က ဒေါ်မိထိုက်ပြောလိုက်တဲ့
ဖာလူတာ ကတော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့။ အဲဒါကို ပြောရမှာ နာမည်မေ့နေတော စားပွဲထိုးကို ခေါ်ပြီး သူက ခေါင်းထဲရှိတာကိုပြောချလိုက်တယ်။ ဒီကို ‘ ဖင်နီတာ’ တစ်ခွက်ပေးပါတဲ့ ။ အဲလိုလဲပြောရော ဘေးကသောက်နေတဲ့သူတွေရော စားပွဲထိုးကရော ရယ်တာပေါ့။ ရှက်တဲ့ ရွာသူားတွေကတော့ ထပြန်သွားတယ်တဲ့။
ဟီး ဟီး ရွာသူားတို့လည်း မှားမပြောနဲ့နော်။
တစ်နေ့ အဲအန်တီကြီးဘဲ မနက်စောစောမှာ စမူဆာနဲ့ လက်ဖက်ရည်သောက်ချင်လို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့မှာတာပေါ့
စမူဆာနဲ့လက်ဖက်ရည်။ စားပွဲထိုးက မေးတယ် အန်တီ ပါဆယ်လား တဲ့၊ ရွာကဆိုတော့ ပါဆယ်တွေလည်း သိပ်နားမလည်လို့ ဒီတိုင်းပြောချလိုက်ပါတယ် ‘ ပါဆယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ပလပ်စတိတ်အိတ်နဲ့ ထုပ်ပေးပါတဲ့ ’။
တချို့လဲ ဖာလူဒါကို ဖွာလူဒါလို့ခေါ်ခေါ်နေလို့ ရီရပါသေးတယ်..
ဖာလူဒါကို ဖင်နီတာ မှားခေါ်မိတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ…
Bu Gyi says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ … အရမ်းပင်ပန်းနေတဲအချိန်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ လန်းသွားတာဘဲ….။
ပါဆယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဈေးကွာခြားမှု ရှိနေတာလေးတွေ ကို ရှင်းပြပေးပါဦးဗျ ။
ဥမပါ = ဇွန်းတပ် လား ဘာညာ ပေါ့
ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်လို့ခေါ် ဘူးလား…………အရင်ကဆို ဂျွတ်ဂျွတ်အိတ်ပဲခေါ်ကြတာများတယ်….
တောကလူတွေကရိုးသားကြပါတယ်။ အပြင်မှာတွေ့ခဲ့ရင် ကြုံခဲ့ရင်ရီပြီးရင်လည်းကူညီပေးလိုက်ကြပါနော်။
ဆက်ရေး …………..နည်းနည်း ရှည်ရှည်လေးရေးပါကွာ။
မန်းလေးဘုရားကြီးမှာ မုန့်ပျားသလက်ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့..
တစ်နေ့မှာ နိုင်ငံဂျားဒါးစုံတွဲ အဒေါ်ကြီးရဲ့ မုန်းပျားသလက်ကို လာဝယ်စားကြတာပေါ့..
နိုင်ငံဂျားဒါးစုံတွဲက မုန့်ပျားသလက် အရသာကို ခိုက်သွားပီးသကာလ..နောက်ထပ်မုန်နှစ်ခုလုပ်ပေး
မုန့်သည်အဒေါ်ကြီးလည်း အော်..ဒီလင်မယား မုန့်ဘေးသားတူးတူးလေးကိုစားချင်တာ
ထင်တယ်ဆိုပီး မုန့်ပျားသလက်ကို ဘေးသားလေးတူးတူးလေးလုပ်ပေးလိုက်သပေါ့ဟယ်…
အောင်နိုင်လင်း က အကို တပည့် အကောင့်ပါကွာ အကို မြို့မှာ အင်တာနက် ဆိုင်က
ညဆို ၂ဆိုင်ထဲ ဖွင့်တော့ လူတွေကြပ်တယ် စက်က မအား ဘူး သူ့ကို ခဏလေး
ဖယ်ကွာ ဆိုပြီးအကို က ၀င်ထိုင် ခပ်မြန်မြန်
ဖတ်လိုက်တာ ရေး ချင်ဇောနဲ့ သူအကောင့် ထွက် ချိန်မရလိုက်ဘူး။(နမော်နမဲ့ ဆိုတာ အကိုပဲကွ)
ညီလေး ဟာသလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ရယ်ရပါတယ်
ဟာ အဲဒါ ငါ့ကြီးတော်ကြီးဟ
ပလတ်စတစ် နဲ့ ထုပ်ရင် အရေးယူခံရနိုင်တယ်နော်။
ဂျပန်တွေ.. မြန်မာပြည်ကကလေးတွေကို.. ပညာရေးထောက်ပံ့ချင်တာတဲ့..
ဘုန်းတော်ကြိးပညာသင်ကျောင်းတွေကို.. အတိုကောက်..”ဘက”ကျောင်း ခေါ်တာကိုး..
Baka (fool) – Wikipedia, the free encyclopedia
Baka (馬鹿, ばか, or バカ) isafrequently used Japanese word meaning “fool; idiot; jerk; dolt; imbecile; foolish; stupid; worthless; absurd; ridiculous; idiotic”.
နာတို့ ဆီမှာတော့ ပါဆယ်ကို လမ်းလျှောက်လို့ ပြောသဟ
၀ါးဟဟဟဟ ရီရဒယ်ကွာ.. ဒါနဲ. ဒေါ်ထိုက်ဆို သော အန်တီကြီးက သများနဲ့ အမျိုးတော်နေမလားမသိဘူးနော်..မိဖရဲ..
သများတို့က ဖင်နီတာတော့ မကြိုက်ပါကွယ်
မန်းလေး ၀ရန် ကြိုက်တယ်….
ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတော့ စိတ်ပင်ပန်းနေတာတွေ လျှော့သွားတာပေါ့ .. ကျေှးဇူးပဲနော်…
နောက်လည်း များများရေးနော်.. အားပေးနေပါတယ်…
အင်မတန်ရီရပါတယ်ဗျို့။ ဟား ဟား
မိတူရက… မိတိုက်ပြောတဲ့ ဖာလူဒါကြီးကို ဖင်နီတာလို့ပြောစရာပေါ့…
သူတို့နှစ်ယောက် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်သောက်ကြတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ်….
ယိုးဒယားရောက်တုန်းက ခေါက်ဆွဲကြော်ဝယ်စားတုန်း… ထုပ်ယူသွားချင်လို့ ဘိုဆန်ဆန်…
Take away လို့ပြောမိပါတယ်… ဂြိုဟ်သားကြည့်သလိုအကြည့်ခံရပြီး Packing လားလို့ပြန်မေးလို့
Packing ပါလို့ဖြေပြီး ယူလာခဲ့ကြကြောင်း…
မြန်မာပြည်ရောက်ရင်လဲ Take away မသိရင် ပါဆယ်လို့သာပြောရမှာဖြစ်ပါသည်ဗျား…
ဖရဲရေ.. နင်ရော ဖင်နီတာကြိုက်လားအေ … :D :D
ဖင်နီတာတော့မကြိုက်ဘူး ဖင်ဖွေးတာတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်
ဟိုက်..ခ်… မမေးခင်ကတည်းက ဖြေချင်နေတယ်နဲ့တူပါရဲ့…
ကျွန်မတုိ့မြို့နားက ရွာကဒေါ်ကြီးကတော့ တမျိုး။ ကျွန်မတို့မြို့မှာ ရထား ၃ မျိုးဖြတ်တယ်။ အမြန်၊ စာပို့၊ ပါဆယ် ဆိုပြီးရထား ၃ စင်းရှိတယ်။ အဲဒါ သူက မြို့ရောက်တုန်းထမင်းသုတ်ဝယ်တာ။ ဟိုကမေးတယ်။ ပါဆယ်လားလို့။ သူက ရထားစီးဖို့လာတာမေးတယ်မှတ်လို့“ မဟုတ်ဘူး စာပို့နဲ့တဲ့။ ”
ဖင်နီတာ ဂို ပလက်စတစ် အိတ်နဲ့ ထုပ်ပေးပါ ..
ကျုပ်ဂ ဖင်နီတာဆို တအားကြိုက်ဒါ .. ဂလု .. :D
မင်းရဲ့  အရုပ်က လက်သီးဆုတ်မပြခင်
ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ဗြဲသီး …
ဟုတ်ရင် ခံ၊ မှန်ရင် ပြန်ပြော …
ဖရဲမရဲ့ဟာသကိုဖတ်ပြီး ပြုံးပြုံး ကြီးအားပေးသွားပါကြောင်း…………
အင်း ဒါလေး ဖတ်တော့ အညာက လာတဲ့ အညာသားဧည့်သည်တွေကို သတိရမိတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ၈ မိုင်ဘက်မှာ တံတားလေးမှတ်တိုင်ရှိသေးတာကိုး အဲဒီနားမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်မိတော့ သူများ မှာသလို မှာကြည့်တာ ပါဆယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလက်ဖက်ရည်လည်းမသိဘူးပေါ့ ဆိုပြီး ပါဆယ်ပဲ မှာလိုက်တာ လာပို့တော့ ဆိုင်က ကောင်လေးကို ဟောက်လိုက်တယ် ဒီမှာ ထိုင်သောက်မှာ ဘာနဲ့ထုပ်လာတာတဲ့လေ…
ပြီးတော့မှ စားပွဲထိုးလေးကို ခေါက်ဆွဲကြော်မှာလိုက်ပါတယ်။
သူက အရင်က ခေါက်ဆွဲကြော်ကို ကြားသာ ကြားဘူးတယ် မစားဘူးဘူးတဲ့။
“‘ဒါများကောင်းကောင်းကန်းကန်းလုပ်နေတယ် ရေနွေးထဲကို အချဉ်ဖတ်ထဲ့တာများ”လို့
ဖရဲမ အဲဒါ ဟိုးရှေးရှေးက
ငါတို့ရွာမှာ စလောင်းရှိတယ် စကိုင်းနက်ရှိတယ်။